Unogona Kuva NeZvinhu Zvakakukwanira Nguva Dzose
"Zvino, Mwari vanogona kukuwanzirai nyasha. Vanogona kukupai maropafadzo ose epanyika pano. Vanoita izvi kuti muve nezvinokukwanirai. Havadi kuti mutsvake kubatsirwa nevamwe. Vanozviitavo kuti muve nezvinokwana kuita mabasa akanaka. Vanoda kuti mugone kupa vanoshaiwa" (2 VaKorinte 9:8 AMPC).
Ini ndakasarudza kushandisa maropafadzo endima iyi muhupenyu hwangu. Ndakasarudza izvi makore akawanda apfuura. Saka ndiwo mararamiro andiri kuita kusvika nhasi. Ndihwo hupenyu hwatakapiwa naKristu. Saka zvinhu zvingawoma hazvo munyika. Tingakanganiswa nenzira dzakasiyana siyana. Asi tinofanira kugara tiine zvinhu zvakatikwanira. Hatifaniri kusvika pakufanira kubatsirwa nevamwe. Asi kune vamwe vasati vadzidziswa hupenyu uhu. Vamwevo havasati vahugamuchira. Saka havasiri kurarama hupenyu hwakadai. Vanhu ava vakatowanda. Izvi hazvifadzi chose.
Kune hupenyu hwekugara uchipemha. Haufaniri kurarama hupenyu hwakadai. Uri muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi iri muzita rako, naKristu, muri pamwe chete. Nyika yose ndeyako. Saka rarama semuridzi wenyika yose. Mwari vakaita kuti ugone kuwana zvose zvinodiwa muhupenyu. Vakaita kuti ugone kuzviriritira. Haufaniri kusvika pakufanira kubatsirwa nevamwe.
Shoko rekuti, "kukwana" iri rakaturikirwa kubva kushoko reChigiriki. Shoko reChigiriki iri nderinoti, "autarkeia". Rinotaura pamusoro pekugona kuzvimiririra. Rinoshandiswa kutsanangura nyika ine zvinhu zvayo zvakakwana. Izvi ndizvo zvatakaitavo. Tava muna Kristu. Hapachina chatisina. Ichi ndicho chokwadi. Chinzwisise. Hapazovi nechinhu chaunoshaiwa. Unozogara uine fuma yakawanda.
Uri munhu anobudirira muhupenyu. Unobudirira zvinhu zvakawoma. Unobudirira zvinhu zvakanaka. Nyika haigoni kukanganisa kubudirira kwako. Izvi ndizvo zvakaita Mwari. Unofunga kuti Mwari vanombofanira kubatsirwa here? Unofunga kuti vanombopererwa nezvinhu here? Kwete! Izvozvo zviri pachena. Zvino, isu tiri vana vavo. Vanoda kuti tinzwisisevo hupenyu hwakadai.
Unogona hako kunge wava kuchembera. Izvozvo hazvina basa. Unogona kufuma zvakadero. Izvi ndizvo zvinotaura Mwari. Tinoverenga mashoko avo muna Jobo 36:11. Inoti, "Kana vakamunzwa nokumushumira, Vachapedzisa mazuva avo vachifara, Namakore avo vari pane zvinofadza". Uhu ndihwo hupenyu hwavakatipa. Hupenyu hwekugara tiine zvose zvatinofanira kuwana. Hupenyu hwekunge uchigona kubatsira vamwe. Mwari ngavapiwe mbiri yose!
Mwari vakandipa nyasha dzose. Vakandipa maropafadzo enyika ino. Vakandipa maropafadzo aya akawanda. Saka zvinhu zvingawoma. Zvinganaka. Ndinogara ndiine zvinondikwanira. Handina pandingafanira kubatsirwa nevamwe. Pamusoro pazvo, ndinotogona kupawo vanoshaiwa. Hazvichagoni kuti ndipererwe nezvinhu muhupenyu. Ndiri muridzi wezvinhu zvose! Hareruya!